Ahoana ny fandefasana haingana ny fampielezan-kevitra miorina amin'ny toetrandro tsy manana fahaiza-manao fandrindrana | Martech Zone
Taorian'ny fivarotana zoma mainty, ny fivarotana krismasy ary ny varotra aorian'ny krismasy dia hita fa ao anatin'ny vanim-potoana fivarotana mankaleo indrindra amin'ny taona indray izahay - mangatsiaka, volondavenona, avy ny orana ary ny oram-panala. Mipetraka ao an-trano ny olona fa tsy mandehandeha mitety ireo toeram-pivarotana.
Fianarana 2010 nataon'i Kyle B. Murray, mpahay toekarena, dia nanambara fa ny fiakaran'ny masoandro dia mety hampitombo ny fihinanana sy ny fahafahantsika mandany. Toy izany koa, rehefa rahona sy mangatsiaka dia mihena ny fahafahantsika mandany. Ambonin'izany, any amin'ny firenena maro, ny trano fisakafoanana, trano fisotroana ary toeram-pivarotana dia mihidy noho ny fameperana ataon'ny governemanta. Amin'ny ankapobeny, ny vinavina dia toa tsy mampanantena loatra.
Ahoana no ahafahanao manatsara ny varotrao amin'ny vanim-potoana ririnina volondavenona sy mankaleo 2021? Paikady iray tsara dia ny, amin'ny andro ratsy indrindra amin'ny toetr'andro, mandrisika ny mpihaino anao hividy amin'ny hafatra manokana sy manokana. Amin'ny andro ririnina, ririnina, azonao atao ny mandefa fampielezan-kevitra miorina amin'ny toetr'andro izay handrisika ny mpanjifanao handrisika azy ireo handany bebe kokoa - na inona na inona avy amin'ny kaody coupon, fandefasana maimaim-poana, freebie mankany amin'ny karatra fanomezana na teboka fahatokisana fanampiny azo taorian'ny fametrahana baiko. Toa lavorary, fa ny mpanjifa manana ny toetr'andro ihany no mifanaraka amin'ny fepetra sasany?
Inona ny atao hoe Weather Marketing
Ny varotra toetr'andro (marketing arakaraka ny toetr'andro na ny fanodinam-bolan'ny toetr'andro) dia automatisation marketing mahery vaika izay mampiasa angona toetr'andro amin'ny toetr'andro mba hampiroboroboana ny doka ary hampifanarahana ireo hafatra momba ny varotra miorina amin'ny toetr'andro eo an-toerana.
Mety ho sarotra sy mandany fotoana ny fananganana fampielezan-kevitra miorina amin'ny toetrandro, saingy soa ihany fa ny SaaS, ny vahaolana voalohany ho an'ny API dia afaka manome vahaolana haingana any amin'ny tsena sy amin'ny tetibola ambany ho an'ny orinasa kely sy salantsalany.
Mba hanampiana ny orinasa amin'ity ririnina ity, izahay, amin'ny Voucherify, dia nanomana tranga fampiasana sy fampianarana momba ny fampielezankevitra mari-barotra toetr'andro ambany ho an'ny aingam-panahy. Nifantoka tamin'ny scenario izay azo apetraka ao anatin'ny roa andro izahay hahafahanay mbola mampiasa azy io amin'ity vanim-potoana ity. Efa nanao fanandramana izahay ary nanangana ny fampielezan-kevitra amin'ny tapakila sy tapakila miorina amin'ny toetr'andro sy eo an-toerana, tsy mampiasa kaody kely, miaraka amin'ny fampiasana sehatra dimy API voalohany. Ny fametrahana dia naharitra adiny roa monja, anisan'izany ny dingana iditra. Ny kaonty pop-up fotsiny no mila kaodinay kaonty mailaka ary mizara ny geolocation mifototra amin'ny IP an'ny mpampiasa fa raha manana endrika ivelany ivelan'ny boaty ianao eo amin'ny sehatra CMS, dia azonao atao ny miala amin'izany dingana izany.
Mba hametrahana ireo fampielezan-kevitra dia mila ireto sehatra manaraka ireto ianao:
Zapier <> Toetrandro Aeris - API mandeha ho azy
ampahany - Sehatra ho an'ny mpanjifa
Voucherify - Rindrambaiko fitantanana fampiroboroboana
Braze - Marketing amin'ny mailaka
Twilio - Marketing amin'ny finday
Ireo fitaovana rehetra ireo dia manana andrana maimaim-poana amin'ny Janoary 2020, mba hahafahanao manandrana an'io fananganana io alohan'ny hanaovanao famandrihana.
Namorona sehatra fampielezan-kevitra roa izahay- ny iray ho an'ny orinasa eo an-toerana ary ny iray ho an'ny orinasa manerantany. Ity misy topy topy kely momba izay azonao apetraka ao anatin'ny ora roa amin'ny fampiasana fitaovana voalaza teo aloha sy ny dingana tokony harahinao hametrahana azy rehetra:
Ohatra 1: Berlin Café - Fanentanana momba ny toetr'andro eo an-toerana
Fanentanana fampiroboroboana ny kafe any Berlin. Amin'ny fiandohan'ny vanim-potoanan'ny ririnina dia mahazo kaody fampiroboroboana roa ny mpampiasa amin'ny alàlan'ny hafatra an-tsoratra izay tsy azon'izy ireo ampiasaina raha tsy mitete ny lanezy (miasa ny kaody voalohany raha mihoatra ny -15 ° C ny mari-pana, hafa raha ambany -15 ° ny mari-pana C). Ny tapakila dia tsy mandeha na alefa isan'andro, mandeha ho azy, mifototra amin'ny toetr'andro ho an'i Berlin izay zahana isan'andro amin'ny 7 maraina amin'ny alàlan'ny automatisie Zapier. Ny kupon dia azo avotana indray mandeha isaky ny mpanjifa.
Ity ny lojika fampiroboroboana:
Raha misy oram-panala ao Berlin, alefaso ny tapakila -20% ho an'ny daholobe.
Raha oram-panala ary milatsaka ambany -15 ° C ny mari-pana any Berlin, alefaso ny tapakila -50% ho an'ny daholobe.
Raha tsy oram-panala, dia esory ny tolotra roa.
Ity ny onja hampiasain'ny fampielezan-kevitra:
Ireto ny dingana ilainao harahina hananganana azy:
Ampidiro ao amin'ny Voucherify ny tobin'ny mpanjifanao (ataovy izay ahitan'ny mombamomba ny toerana sy ny nomeraon-telefaona).
Manamboara fizarana ho an'ny mpanjifa avy any Berlin.
Mamorona kaody roa mitokana -20% sy -50% miaraka amina kaody namboarina.
Mizarà kaody amin'ireo mpanjifa amin'ny alàlan'ny SMS amin'ny alàlan'ny fidirana Twilio. Ohatra izao ny ohatra iray:
Mandehana any Zapier ary manangana fifandraisana amin'i AerisWeather.
Ao anatin'ny fikorianan'ny Zapier dia angataho i AerisWeather mba hijery ny toetr'andro any Berlin isan'andro amin'ny 7 maraina.
Atsaharo izao workflow Zapier manaraka izao:
Raha feno ny toetr'andro, dia mandefa fangatahana POST any amin'ny Voucherify i Zapier hahafahan'ny voucher.
Raha tsy feno ny toetr'andro, dia mandefa fangatahana POST ho any amin'ny Voucherify i Zapier mba hanajanonana ireo voucher.
Ohatra 2: Fanentanana momba ny toetrandro manerantany ho an'ny fivarotana kafe an-tserasera - Avelao hirotsaka
Ity scenario fampielezan-kevitra ity dia natao ho an'ireo orinasa manerantany izay aparitaky ny mpampiasa amin'ny toerana samihafa. Amin'ity fikoriananao ity dia azonao atao ny mikendry ireo mpampiasa avy amin'ny tanàna sy firenena samy hafa mifototra amin'ny toetrandro eo an-toerana.
Raha oram-panala ny oram-panala dia mahazo tapakila ho an'ny thermos maimaim-poana ny mpampiasa, azo avotana raha toa ka mihoatra ny 50 $ ny baikon'izy ireo.
Raha toa ny oram-panala ary ny mari-pana dia ambany -15 ° C, ny mpampiasa dia hahazo karatra fanomezana $ 40 manan-kery ho an'ny baiko mihoatra ny 100 $.
Azo avotana indray mandeha isaky ny mpanjifa.
Valin'ny coupon fito andro aorian'ny famoahana.
Ny fahamendrehan'ny karatra fanomezana amin'ny faharetan'ny fampielezan-kevitra (raha ny anay, hatramin'ny 01/09/2020 ka hatramin'ny 31/12/2020).
Toa izao ny dian'ny mpampiasa amin'ity fampielezan-kevitra ity:
Ny doka iray (ohatra, doka Google na Facebook) dia mitondra mankany amin'ny pejy fandraisana miaraka amina endrika iray hamenoana. Ao amin'ny endrika, ny mpitsidika dia tsy maintsy mamela ny fizarana toerana sy hiditra ny adiresy mailaka mba handray anjara amin'ny fanentanana miorina amin'ny toetrandro.
Raha toa ny mpampiasa, amin'ny toerany (nomen'ny mpitety tranonkala), amin'ny fotoana famenoana ny takelaka, dia manana ny toetr'andro voalaza ao amin'ny fampielezan-kevitra, dia hahazo ny tapakila na karatra fanomezana izy ireo.
Ny tapakila na karatra fanomezana dia hatolotra an'ireo mpampiasa mahay amin'ny alàlan'ny fizarana mailaka Braze. Ny tapakila / karatra fanomezana dia hanan-kery mifanaraka amin'ny fitsipiky ny fampielezan-kevitra (avy amin'i Voucherify), ary ireo mpanjifa izay manome baiko mahafeno fepetra efa napetraka ihany no afaka manavotra azy ireo.
Ahoana no fomba fiasa amin'ny fomba fijery ara-teknika?
Tonga amin'ilay fiantsonana pejy ary mameno ny takelaka hizara ny mombamomba ny mailaka sy ny geolocation amin'ny alàlan'ny browser API.
Ny endrika dia mandefa ny angon-drakitra ho an'ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny webhook mankany Zapier:
Zapier dia mandefa ny angona any amin'ny Segment.
Ny ampahany dia mandefa ny angona any amin'ny Braze sy Voucherify.
Zapier dia manontany an'i AerisWeather momba ny toetr'andro eo an-toerana ho an'ny mpampiasa, mifototra amin'ny fampahalalana momba ny geolocation. Misy lalana roa mety harahin'i Zapier:
Raha toa ny orampanala ary ambany ny -15 ° C ny mari-pana, dia:
Zapier dia mangataka an'i Voucherify hanavao ny mpanjifa noforonina taloha miaraka amin'ny metadata: isCold: true, isSnow: true.
Ny fizarana karatra fanomezana ny karatra fanomezana dia mandeha ho azy, nateraka rehefa miditra amin'ny sehatra mifandraika ny mpanjifa. Ny ampahany dia hanangona ny mpanjifa mahafeno fepetra roa metadata dia iCold: true AND isSnow: marina.
Raha any amin'ny toerana ipetrahan'ny mpampiasa dia oram-panala ary ny mari-pana dia mihoatra ny -15 ° C, avy eo:
Zapier dia mangataka an'i Voucherify hanavao ny mpanjifa amin'ny metadata: isCold: false, isSnow: marina.
Ny fizarana kaody fihenam-bidy thermos maimaim-poana dia mandeha ho azy, nateraka rehefa miditra amin'ny sehatra mifandraika ny mpanjifa. Ny sehatra dia hanangona ny mpanjifa mahafeno fepetra roa metadata dia iCold: diso AND isSnow: marina.
Ity misy famintinana ireo dingana tokony hataonao mba hametrahana ity fanentanana ity:
Mamorona metadata ho an'ny mpanjifa ao amin'ny Voucherify.
Manamboara fizarana ho an'ny mpanjifa ao amin'ny Voucherify.
Mametraha fanentanana roa - tapakila sy karatra miavaka amin'ny Voucherify.
Manomàna fizarana mandeha ho azy miaraka amin'ny Braze amin'ny fampiasana ny fampiasa Custom Attributes.
Mamorona pejy fitobiana miaraka amina forme hanangonana ny mombamomba ny mpanjifa sy ny bokotra ahafahana mizara ny toerana. (Eto ianao dia mety mila mpamorona hanampy anao raha tsy manana endrika ivelan'ny-boaty amin'ny sehatra e-varotra / CMS) ianao.
Amboary ny fampidirana Segment hahazoana ny angona azo avy amin'ny endrika ary afindra amin'ny Braze sy Voucherify.
Mandehana any Zapier ary mamorona Zap miaraka amin'ireo plug-in AerisWeather, Segment, ary Voucherify.
Azonao atao ny manamboatra an-tsakany sy andavany ny fikoriananao hahatratra ny tanjon'ny orinasa tsy manam-paharoa. Ny fikorianana etsy ambony dia mifototra amin'ny fanamarinana ny toetr'andro rehefa fenon'ny mpanjifa ny takelaka ao amin'ny pejy fiantsonana. Azonao atao ny manova io fikoriananao io mba hijerena ny toetr'andro amin'ny fotoana anavotana ny famporisihana ao amin'ny magazinao. Amin'ity karazana fampielezan-kevitra ity dia mahazo ny tolotra ny mpanjifa rehetra saingy amin'ny toetr'andro efa voafaritra ihany no hampiasana azy. Miankina aminao izay mikoriana mifanaraka amin'ny zavatra ilainao tsara kokoa.
Ireo fampiroboroboana ireo dia mora apetraka sy hampiasa vahaolana voalohany ho an'ny API izay manandramana maimaimpoana. Azonao atao ny manangana azy ireo, manomboka mandritra ny roa andro ary mahita ny valiny, alohan'ny hanaovana famandrihana voaloa. Raha te hanangana azy ianao dia azonao atao ny mamaky ny torolàlana feno amin'ny pikantsary sy torolàlana isaky ny dingana ho an'ny seho fampielezan-kevitra roa amin'ny Gazety Voucherify.io 200 OK.
Ireny fampielezan-kevitra roa ireny dia tranga iray ampiasaina fotsiny amin'ireo sehatra voalaza etsy ambony. Betsaka ny fampiroboroboana hafa, ivelan'ny-boaty azonao amboarina amin'ny fampiasana ireo sy / na sehatra hafa API-voalohany.
Momba ny Voucherify.io
Voucherify dia rafitra fitantanana fampiroboroboana API voalohany ho an'ny ekipa nomerika izay manome hery ny ekipa mpivarotra hamoahana haingana ny tapakila, fanondroana, fihenam-bidy, fanomezana ary fanoloran-tena haingana.
Manomboha amin'ny Voucherify
Tags: toetrandro aerisAPIBrazetsy misy codegeolocationampahanyTwiliomanamarinaWeathervarotra toetr'androtoetr'androzapier